Costa Rica: Ilay ‘Cirque’ Manavotra Ain’Ankizy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Mey 2012 8:15 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Français, 繁體中文, 简体中文, 日本語, русский, Español, Ελληνικά, English
Ao anaty lahatsary iray fanadihadiana ny tantaran'ny nofinofin'ity zazalahikely 12 taona ity miofo ho tena izy, avy amin'ny New Life Asociation (Asociacion Vida Nueva), na Fikambanana ho amin'ny Fiainam-Baovao. Ao anaty tafatafa iray, azavain'ny renimpianakaviana iray ny mahatonga ny tanora hiavotra amin'ny herin'ny tenany, ka mahatonga azy ireny hiafara any amin'ny adin-saina na lasa miankin-doha amin'ny zava-mahadomelina noho ny tsy fahampian'ny fahafahany mandranto fanabeazana na mahazo asa. Ny Cirque no manome azy ireo vintana ho afa-mianatra fahaiza-manao, ny fifehezan-tena ka lasa mpikambana anaty vondrona iray izay manome hasina azy ireo. Tantaran'i Josue ihany koa izy ity, izay niala lavitra an'ilay Cirque; ary saika maty noho ny fatra tafahoatran'ny zava-mahadomelina noraisina. Araka ny ambarany, niverina tao amin'ilay Cirque izy, toerana fantany fa hahitany ny tohana ho enti-manohy ny fiainany, ary ankehitriny izy dia manandrana ny miala lavitra ny tsindry ataon'ireo sokajin-taona mitovy aminy.
Ny Sula Batsú Cooperative ao Costa Rica izay miasa manofana sy manamafy ny fahaiza-manao ho an'ireo kaoperativa sy ireo fikambanana hafa tsy miankina amin'ny fanjakana dia nizara rohy iray tamin'ny alàlan'ny pejy Facebook-ndry zareo mankany amin'ilay lahatsary fampahafantarana, miaraka amin'ny fanamarihana hoe: